Pop! _OS Linux inopinda yayo Beta vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Zuva rimwe chetero seUbuntu 17.10 yapinda Beta vhezheniPop! _OS Linux yapinda, inoshanda sisitimu yakagadzirwa neSystem76 uye yakavakirwa paUbuntu 17.10 pachayo. Iyi sisitimu yekushandisa yakagadzirirwa kuti ishandiswe mumalaptop eSystem76. Aya malaptop akavakwa kutakura Ubuntu, zvisinei ivo zvino vachatakura Pop! _OS Linux.
Nekudaro, izvi hazvireve kuti Pop! _OS Linux ive yakasarudzika kumatanho eSystem76, asi inogona zvakare kuiswa pane chero komputa inoenderana, chimwe chinhu chinoita kuti ive kukosha kwakanyanya kugovera kufunga nezvayo.
Kugoverwa uku kwakavakirwa chose pa Ubuntu 17.10, iyo ichabuda munguva pfupi pfupi zvakare. Sezvo Ubuntu 17.10 ichiri mune yayo beta vhezheni, Pop! _OS Linux yaizoburitswa mushure meiyi, sezvo vachifanira kunge vakavakirwa pane yekupedzisira vhezheni yeUbuntu 17.10 kuona kudzikama.
Iyi inoshanda system, ichatakurawo Gnome 3.26 se desktop huru, pamwe neWayland graphical server, iri pamberi pe graphical server yeLinux. Uye zvakare, ichave iine pre-akaisa madhiraivha ekushandira paSystem76 makomputa, ayo anouya pamwe nekuparadzira uku kwakafanogadzwa. Pamusoro pezvo, ivo vanozove nevavanochengeterwa, asi vacharamba vachiwana zvinyorwa zveUbuntu kuitira kuwedzera mamwe maapplication aunoda.
Ehezve, kuve iyo Beta vhezheni, kuchine zvakawanda zvekukanganisa izvo zvichiri kuda kugadziriswa. Chekutanga pane zvese, Pop! _OS Linux haina kunyatso kuenderana neiyo HiDPI inoratidzira, ine mamwe mabhugi ane chekuita neFirefox browser, pamwe nemabhugi ane mifananidzo yeNvidia. Zvisinei, nyaya idzi dziri kutarisirwa kugadziriswa mumwedzi wese.
Beta vhezheni inogona kuyedzwa, kurodha pasi mufananidzo kubva pano. Nekudaro, izvo zvishoma zvinodiwa zviri kumusoro, zvinoda 2 GB yeRam kuti ishande, uye senge Ubuntu 17.10, inoshanda chete pamakomputa makumi matanhatu nemasere. Rangarira kuti iri Beta vhezheni, saka hazvikurudzirwi kuti uishandise munzvimbo yebasa iyo ine ruzivo rwakakosha, nekuda kwembugs iyo inogona kunge iine.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Pop! _OS Linux inopinda yayo Beta vhezheni